China S09P 3 IN 1 Type C Adapter ine 4K HDMI, PD100W, USB 3.0 fekitori nevatengesi | Huachuang Electronic
S09P 3 IN 1 Type C Adapter ine 4K HDMI, PD100W, USB 3.0
Chigadzirwa Chigadzirwa: 3 Mu 1 Type-C Adapter
Zviteshi: Type C Kuti PD 100W + 4K HDMI + USB 3.0
Kurema: 32 g
Kukura: 70 * 35 * 12 mm
3, 【Shanu-mu-imwe USB C Hub】 Unganidza kune ichangoburwa MacBook Pro kana USB-C michina ine multiport USB-C hub inoratidzira ne USB C yekuchaja chiteshi neyekutakura magetsi, chiteshi che4K HDMI, 1 USB 3.0 Ports ichikubvumidza kuti ubatanidze. keyboard, mbeva, USB mutyairi, wekunze Disiki kune MacBook Pro.
4, 【Dhirivhari Yemagetsi】 USB Type C hub cinokanda MacBook Pro yako kana zvimwe Type-C zvishandiso ipo ichibatanidza 100W yekuendesa magetsi port. Iye zvino mamwe akawanda mishini uye iyo nyowani Mac Pro kutsigira PD. Nekutumirwa kwemagetsi, chiteshi chimwechete che USB-C chinogona kukupa Blazing-nekukurumidza kuchaja chiitiko. Nenzira yakakodzera MacBook Pro.
5, 【Yakajeka 3D Mhedzisiro Vhidhiyo Sync】 HDMI Tsigiro inosvika 3840 * 2160 @ 30Hz resolution zvichiteerana. Iwe unogona kunakidzwa yakajeka 3D mhedzisiro vhidhiyo mune yakakwirira-resolution kubva kune yako USB-C komputa kune yekunze yekutarisa. HDMI port inotsigira hombe screen LCD TV kana kuratidza inoenderana ne 4K Max kubuda. Ipa iwe yakajeka 3D maitiro vhidhiyo Sync.
Yepfuura: P02 5 IN 1 USB C HUB ye iPad Pro ine HDMII, 100 W PD, USB2.0, USB3.0, 3.5mm Jack
Inotevera: T18 8 IN 2 Type C HUB Yakaberekerwa Macbook Pro & Mhepo, ine HDMI, PD100W, Ethernet, 3 x USB 3.0, SD, TF Kadhi Reader
3 mu 1 rudzi c hub
yakanaka macbook usb c hub
mhando c hub adapter
usb c kuchaira hub
usb c hub ine usb c ports
usb c para usb 3.0 hub
5 MU1 USB-C Adapter ine HDMII, 100 W PD, VGA, US ...
P02 5 IN 1 USB C HUB ye iPad Pro ine HDMII, 1 ...
11 IN 1 USB-C HUB Yakaomeswa Girazi neEthernet ...